Malunga nathi -Ningbo Rumotek Magnetic Technology Co., Ltd.
Iqela lethu liqukethe iingcali ezinokuthenjwa eziqeqeshelwe ukujongana nayo yonke imiba yeeprojekthi zemagnethi. I-Rumotek yindawo efanelekileyo yokufaka, yokujonga ngokuchaneka okuphezulu kunye nenkampani yolondolozo egubungela indawo yaseYurophu naseMntla Melika.
Iqela lethu lemagnethi likunika ulondolozo lofakelo lwendibano yakho kunye nezixhobo. Yonke le nkqubo ngokungqongqo athobele ISO 9001: 2008 kunye ISO / TS 16949: 2009 inkqubo yolawulo lomgangatho. Nganye iinjineli zethu ziqala ukuthatha inxaxheba kwiprojekthi yamagnetic ngokusekwe okungenani kwiminyaka emi-6 yamava kumazibuthe kubandakanya imizobo ye-CAD, izixhobo kunye noyilo lwemidlalo kunye nokusetyenziswa, iiprototypes zokugqiba kunye nokuvavanywa. Oku kusenza sikwazi ukunikezela awona manqanaba aphezulu enkonzo yobungcali kuwe.
Ukugqwesa, kuqala ngokuziqhelanisa
I-RUMOTEK inyanzelise imboni yemagnethi njengenye yeenkampani eziphambili ezivelisa i-NdFeB, iSmCo, iAlNiCo, iCeramic neMagnetic Assemblies.
Iqela lomyili ogqwesileyo laye lahlula imbali yenkampani kwasekuqaleni kwaye ibisoloko ikhokela ukuvela kweemveliso ezilandela indlela ye-ORIGINALITY, ELEGANCE kunye ne-QUALITY NGAPHANDLE KWENKQUBO.
Iminyaka emininzi ukufakwa kwemagnethi kunye namava okumatshini asibonelela ngombono wobugcisa kunye nokusebenziseka kwayo yonke into enxulumene nemagnetism.
Imigangatho esemgangathweni ophakamileyo, ukujonga kufutshane kuyilo kunye nobungcali kwezorhwebo zezona zinto zinike iRUMOTEK impumelelo yayo e-China nakwamanye amazwe njengomnye wabona baqhubi bafanelekileyo kushishino lukazibuthe.
Khathalela iinkcukacha, uyilo lomntu, ukhetho ngononophelo lwezixhobo, uphuhliso lwetekhnoloji oluqhubekayo kunye noqwalaselo oluphezulu kulwaneliseko lwabathengi. Imigangatho esemgangathweni ophakamileyo, ukujonga kufutshane kuyilo kunye nobungcali kwezorhwebo zizithako ezenze iimveliso zeRUMOTEK lukhetho olufanelekileyo.
I-Rumotek isebenza kumgangatho obalaseleyo, ukuvelisa okuqhubela phambili, kunye noyilo olutsha oluyimagnethi ukwenza impumelelo yabathengi kunye nokukhula kombutho wethu.
Umbono weRumotek kukuba ube ngumboneleli onamandla, onamandla, ohlanganisiweyo opheleleyo wezisombululo. Singoovulindlela ekuphuhlisweni kwezicelo kunye neetekhnoloji evala izikhewu kumaqabane ethu aphambili kushishino abajamelana nawo ekuqhubeleni phambili nezisombululo ezinqabileyo.
Inkcubeko kaRumotek ixhobisa amaqela ethu ukuba avelise izinto ezintsha, afunde, kwaye anike izisombululo ezinefuthe elihle kwilizwe lethu. Imeko-bume yethu eguqukayo nenenkxaso yabantu abaqhuba kakuhle banomdla kwizisombululo esizinika abathengi bethu. Sityala imali kumaqela ethu nakuluntu.
Uyilo kunye nezoBunjineli: I-Rumotek ibonelela ngendawo epheleleyo yophuhliso lwenkonzo isebenzisa iintlobo ngeentlobo ze-2D kunye ne-3D yesoftware yokulinganisa. Iintlobo ngeentlobo zeealloys ezisemagqabini nezingaqhelekanga zigcinelwe ukwenziwa komzekelo wokuqala okanye iimveliso zemveliso. Uyilo lweRumotek kwaye lwenza izisombululo zemagnethi zeeprojekthi kwi:
• Isixhobo sezixhobo
• Ulawulo lweeMoto zoMbane
• Inkonzo yeFama ye-oyile
Ukuphathwa kwemathiriyeli yokuhambisa
• Ukwahlukana kweNtsimbi
• Inkqubo ye-Brake ne-Clutch
• Iinkqubo zeAerospace kunye nezoKhuselo
• Ukuvusa inzwa
• UkuBekwa kweFilimu eNcinci kunye nokuBekwa kweMagneti
• Izicelo ezahlukeneyo zokubamba nokuphakamisa
• Ukutshixa iNkqubo yoKhuseleko